Ashin Pyinnyar Nanda | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
← Arkar Htat – Save The Irrawaddy
Interview with U Win Tin – New Political Chapter of Suu & NLD? →
အညတရအကျဉ်းသားရဟန်းတော်များ (၃) – ဦးသောဘိတ
မိုင်းကွင်းရှိတဲ့နေရာတွေရောက်ပြီဆိုရင် ဦးဇင်းတို့ပေါ်တာတွေကိုရှေ့ကနေသွားခိုင်းတာဘဲ မသွားလို့လည်းမရဘူးလေ သူတို့လက်ထဲမှာ သေနတ်ရှိတယ် မသွားရင်ပစ်သတ်မယ်ပြောတော့ကြောက်ကြောက်နဲ့သွားရတာပေါ့လို့ပြောတဲ့ အကျဉ်းသားဦးဇင်းလေးကတော့ ရှေ့တန်း ပေါ်တာအထမ်းသမားအဖြစ်နဲ့ သုံးကြိမ်ပါသွားတဲ့ ခင်ဦးနယ်ဘက်က စာသင်သားဦးဇင်းလေး ဦးသောဘိတပါ။
ရန်ကုန်၊ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် (—-) ကျောင်းတိုက်မှာစာသင်နေတုန်း ရပ်ကွက်ထဲက ဒကာဒကာမတွေကို ပိတ်ပင်ထားတဲ့ ဆရာတော်ဦး ဉာဏိဿရရဲ့မင်းကျင့်တရား (၁၀) ပါး၊ ဝေရသူဆရာတော်ရဲ့ အမျိုးဘာသာ သာသနာစောင့်ရှောက်ဘို့ ဟောထားတဲ့တရားခွေတွေ မင်းကွန်းဆရာတော်နဲ့ တောင်မြို့ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ တရားကောက်နှုတ်ချက်တွေကို ဖြန့်ဝေမှုနဲ့ အဖမ်းခံရတာပါ။ ဆရာ တော်တွေဟောကြားရေးသားထားတာတွေအားလုံးက ဗုဒ္ဓအလိုကျဟောကြားထားတဲ့တရာတော်တွေဖြစ်ပေမဲ့ ကိုယ့်အမျိုး ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်သာသနာကိုစောင့်ရှောက်ဘို့ ဟောကြားရေးသားထားတာတွေဟာ စစ်အာဏာရှင်တွေလက်ထက်မှာ အစိုးရကိုဆန့်ကျင်တဲ့ ပြစ်မှုကို ကျူးလွန်တာဖြစ်နေပါတယ်။
မတ်လ ၁၁ ရက် ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ ည (၁၁)နာရီလောက်မှာ တပည့်တော်တို့ကျောင်းက (၃၇) ပါးအဖမ်းခံရတယ်။ ကိုရင်ငယ်လေး ၁၀ ပါးပါတယ်။ ကိုရင်လေးတွေကိုတော့ ငယ်လွန်းသေးတာကြောင့် ပြန်လွတ်ပေးတယ်။ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးနဲ့ စာချဘုန်းကြီးတွေကတော့အဖမ်းမခံရဘူးဘုရား။ သူတို့က လာဖမ်းတဲ့သူတွေကို မင်းတို့သဘောဘဲပြောလိုက်လို့တပည့်တော်တို့ဘဲအဖမ်းခံရတာပါလို့ ပြောပြပါတယ်။ တပည်တော်အဖမ်းခံရတုန်းကအသက် ၁၈ နှစ်။ ကိုရင်ဘဲရှိသေးတယ်။ ရဟန်းမဖြစ်သေးဘူးဘုရား။ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်က လုံထိမ်း ၃၀ လောက်နဲ့ အရပ်ဝတ်ထားတဲ့ထောက်လှမ်းရေးတွေ၊ ပြီးတော့ ရပ်ကွက်ထဲက ကြံ့ဖွံ့နဲ့စွမ်းအားရှင်တွေက ၀ိုင်းဖမ်းတာဘုရား။ ကားပေါ် ရောက်တာနဲ့ လက်ထိပ်ခတ်ပြီး နံပတ်တုတ်တွေနဲ့ခေါင်းတွေ ကျောတွေကို အချက်ပေါင်းများစွာအရိုက်ခံရတယ်။ ခေါင်းပေါ်ကကျတဲ့ သွေး တွေ မျက်နှာတခုလုံးကိုဖြာနေတာဘဲ။ မူးကနဲ မိုက်ကနဲကိုဖြစ်တာ အဲဒီလို ရက်ရက်စက်စက် အဖမ်းခံရတာပါဘုရားလို့ သူတို့အဖမ်းခံရပုံကိုပြန်ပြောရင်း လက်သီးဆုပ်လိုက်တာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။
တပည့်တော်တို့က ဘာရာဇ၀တ်မှုမှ ကျူးလွန်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားကြားထားတဲ့ တရားတော်တွေဘဲဝေတာ ကိုယ့်ဒကာဒကာမတွေ အမှား အမှန်သိအောင် တရားအသိဉာဏ်ရှိအောင်ဖြန့်ဝေပေးတာ။ အဲဒါကိုဘဲ သူတို့ကိုဆန့်ကျင်တယ်ဆိုပြီး ဖမ်း တယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်က မကောင်းတာတွေလုပ်နေတော့ သူတို့ကိုစောင်းပြောတယ်ထင်နေတာဘုရား။ မြတ်စွာဘုရားသာ သက်ရှိ ထင်ရှားရှိနေသေးရင် အဖမ်းခံရမှာသေချာတယ်လို့သူရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြပါတယ်။
ဘာပုဒ်မတွေတပ်ပြီး ထောင်ဘယ်နှစ်နှစ်ကျခဲ့တာတုန်းလို့မေးကြည့်တော့ ၂၉၅ (က) သာသနာညှိုးနွမ်းအောင်လုပ်လို့တဲ့ဘုရား။ အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ် (၂) နှစ်ချလိုက်ပြီး အင်းစိန်ထောင်ပို့လိုက်တယ်။
အရှင်ဘုရားရေး စ, ဖမ်းထဲက သွေးထွက်သံယိုအရိုက်ခံရတာ ဘယ်နေလိမ့်မလဲ ခံရတာပေါ့။ နှစ်ရက်သုံးရက်လောက် တယောက်ပြီး တယောက်လာပြီး မအိပ်မနေစစ်တာ။ ထိုးတာ ရိုက်တာ စစ်ဘိနပ်တွေနဲ့ကန်တာခံရတာပေါ့။ ထောင်ထဲရောက်တော့လည်း ပုံစံထိုင်တာ မမှန်လို့တဲ့ အရိုက်ခံရတယ် အကန်ခံရတယ်။ ထမင်းမ၀လို့ ထပ်တောင်းတာ ထမင်းဝေတဲ့ ဇွန်းကြီးနဲ့ခေါင်းအရိုက်ခံရတယ်။ ပြောမယ်ဆို အများကြီးပါဘဲ။ အဆိုးဆုံးကတော့ထောင်ထဲမှာ အချင်းချင်းလိင်တူဆက်ဆံတာတွေမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ တကယ့်အနိဌာရုံတွေပါဘုရားလို့ ထောင်တွင်းမှာကြုံတွေ့ ခဲ့ရတာတွေကိုပြောပြပါတယ်။
အရှင်ဘုရား ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကို ပေါ်တာသုံးခါပါသွားတယ်ဆို။ ဘယ်နေရာတွေရောက်ခဲ့လဲ ဘာတွေလုပ်ခဲ့ရတာလဲ ပေါ်တာအတွေ့ အကြုံလေးလည်း ပြောပါအုံး။
ထောင်ထဲရောက်ပြီး ၃ လလောက်ဘဲရှိသေးတယ်။ ငွေမပေးနိုင်လို ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာမှာ ပေါ်တာထမ်းဘို့ တောင်ငူထောင်ပို့လိုက်တယ်။ ၃၁ ဇူလိုင် ၂၀၀၅ ကနေ ဖေဖ၀ါရီ ၄ ရက် ၂၀၀၆ အထိ ကျောက်ကြီး ခလရ (၆၀) ကနေ ဘော်ဆဲခိုစခန်း ပလတ်ခိုစခန်း အဲဒီကနေ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ထီးထစခန်း စောထစခန်းနဲ့ ထိမုထစခန်းတွေကို တလကြာသွားရတယ်။ ဒုတိယအခေါက်က ရွှေကျင်-မဒေါက် ဗိုက်ကြီးမတောင်၊ တတိယအခေါက်ကတော့ သံတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ လိပ်သိုဘက်ကိုသွားရတယ်။ ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာပါဘဲ။ လက်နက် ကျည်ဆံရိက္ခာ ဆေးဝါးတွေထမ်းရတယ်။ မထမ်းနိုင်တော့ဘူး လမ်းမလျောက်နိုင်တော့ဘူး တောင်မတက်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင် စစ်ဘိနပ် တွေနဲ့ အကန်ခံရတယ်။ သေနတ်ဒင်နဲ့အဆောင့်ခံရတယ်။ မအေတွေ နှမတွေနဲ့ မိုးမွှန်အောင်ဆဲတာခံရတယ်။ မလိုက်နိုင်တော့လို့ဓားနဲ့ထိုးသတ်ခံရတဲ့ ပေါ်တာတွေလည်းရှိတယ်။ တခါတလေ ထမင်လည်းငတ် ရေလည်းငတ် သုံးလေးရက်ဆက်တိုက်လမ်းလျောက်ရတာတွေရှိတယ်။ ရန်သူ့နယ်ထဲရောက်လို့ မိုင်းရှိမယ်ထင်တဲ့နေရာတွေကို ပေါ်တာတွေကိုအရင်သွားခိုင်းတယ်။ မသွားချင်လည်းမရဘူး ပြန်မ ပြောနဲ့ခိုင်းတာလုပ် ပြန်ပြောရင်ပစ်သတ်မယ်လို့ တခါတည်းပြောထားတယ်။ မိုင်းထိလို့ ခြေပြတ်လက်ပြတ်ပေါ်တာတွေကို ပြန်မခေါ် တော့ဘူး။ လမ်းမှာထားခဲ့တယ်။ သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်။ စစ်သားတွေမိုင်းထိရင်တော့ ပေါ်တာတွေကထမ်းရတယ်။ အဲဒီအချိန်ကတော့ အရမ်းစိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းသလို တိရစ္ဆာန်တွေလို မတရားအခိုင်းခံရလို့ ပြောမပြတတ်အောင် နာနာကျင်ကျင် ခံစားရပါတယ်လို့ပြောတဲ့ သူရဲ့ပေါ်တာအတွေ့အကြုံတွေကိုနားထောင်ရင်း စစ်တပ်ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ ရာဇ၀တ်မှု ကျုး လွန်ခဲ့တာတွေကို ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ ရပါတယ်။
တပည့်တော် အယူခံနိုင်ဝင်တာနိုင်လို့ ထောင်ထဲမှာ ၁၁ လဘဲနေခဲ့ရပေမဲ့ ရှေ့တန်းမှာ ကံကောင်းလို့မသေခဲ့တာပါဘုရား။ ပေါ်တာ အတွေ့ အကြုံတွေကတော့ တပည့်တော်ဘ၀မှာ တကယ့်ကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါးအတွေ့အကြုံတွေပါဘုရား။ ထောင်ကလွတ်ခါနီး ထောင်မှူးကမှာလိုက် သေးတယ်။ မင်းတို့နောက်ကိုအစိုးရဆန့် ကျင်တာတွေမလုပ်နဲ့ နောက်တခါဆို ဒီထက်ဆိုးမယ်လို့တဲ့။
ထောင်ကလွတ်တာနဲ့ ရွာကိုပြန်တယ်။ ညဆို တပည့်တော်မိဘအိမ်မှာမအိပ်ရဘူး။ ၇၅ ရက်လောက် နေ့တိုင်းလက်မှတ်ထိုးပြီး ဥက္ကဋ္ဌအိမ်မှာ သွားအိပ်ရတယ်။ နောက်တော့သင်္ကန်းပြန်ဝတ်ပြီး ရန်ကုန်မှာ စာဆက်သင်တယ်။ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်အရေးအခင်းဖြစ်တော့ ရှေ့တန်းကနေ သာသနာ့အလံကိုင်ပြီး ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့တယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ စစ်တပ်က၀င်ဖမ်းတော့ ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေဘက် ရှောင် တိမ်းနေခဲ့တယ်။ အဲဒီကတဆင့် ထိုင်းနယ်စပ်ကို ဒီဇင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၉ မှာ ရောက်တယ်။ ခု အုန်းပြန့်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေထိုင်ရင်း ဒုက္ခသည်အဖြစ်လျောက်ထားဆဲပါ။ မသေချာမရေရာတဲ့ အနာဂတ်ကိုရင်ဆိုင်ရင်း သူများနိုင်ငံမှာ အနှိမ်ခံဘ၀နဲ့နေရအုးံမှာပေါ့ဘုရားလို့ ၀မ်းနည်းသံနဲ့ပြောခဲ့တာတွကို ပြန်လည်ကြားယောင်နေမိပါတော့တယ်။ ။
Posted by oothandar on August 17, 2011 in Ashin Pyinna Nanda, Variety Article